Zavatra 11 Misy fiantraikany amin'ny fotoana maharitra hahalalana ny fisarahana - Fifandraisana
Zavatra 11 Misy fiantraikany amin'ny fotoana maharitra hahalalana ny fisarahana
Misy sombin-pahendrena tonta ary matetika voatonona milaza fa mila antsasaky ny halavan'ny fifandraisana iray vao tafavoaka izany.
Noho izany, raha efa niaraka tamin'ny olona iray nandritra ny folo taona ianao dia mety haharitra 5 taona eo ho eo vao tafavoaka ilay fisarahana.
Fa izany foana ve no izy? Tsy voatery.
Rehefa sitrana amin'ny fisarahana ianao dia afaka manantena ny hiaina zavatra maro samihafa. Ireo rehetra ireo dia hiankina amin'ny faharetan'ny fifandraisana, ny halehibeny, ny toetranao ary ny fiafaran'ny raharaha.
Tsy natao hiteraka fanahiana izany aminao: ianao dia miala amin'ity. Mila fotoana isan-karazany fotsiny arakaraka ilay olona.
Inona avy ireo antony manimba ny fotoana fanasitranana amin'ny fisarahana?
Mahazo ny fiafaran'ny fifandraisana amin'ny hafainganam-pandeha hafa ny olona, ​​ary misy zavatra izay mandray anjara lehibe amin'izany hafainganana izany. Zavatra toy ny:
1. Ny toetranao.
Raha olona be fientanam-po ianao izay mamorona fifamatorana lalina amin'ny hafa haingana, dia mety ho elaela vao sitrana ianao amin'izany.
Mazava ho azy, raha olona misaraka am-po kokoa ianao izay maharitra fotoana lava hamoronana fifandraisana sy fifamatorana amin'ny hafa, dia mety tsy hijaly mafy toy izany ianao rehefa tapitra ny fifandraisana.
Ny olona afaka manaiky zavatra mora ihany koa dia manana fanasitranana fotoana misimisy kokoa noho ny fisarahana.
Ireo izay mahatsapa fa mila mifehy ny ankamaroan'ny lafiny amin'ny fiainany dia tsy mandeha ihany koa rehefa misy mamarana ny fifandraisana amin'izy ireo. Matetika izy ireo dia tezitra be sy mampihetsi-po ary manandrana mamadika ny zava-drehetra ka izy ireo no mifehy ny fitantarana.
Araka ny azonao an-tsaina, ireo izay afaka mikoriana amin'ny onjan'ny fiainana dia manana fotoana mora kokoa rehefa miseho ny tsy ampoizina.
2. Hatraiza ny halavirana azonao apetraka eo anelanelanao sy ny olon-tianao taloha.
Betsaka ny olona manana fahasamihafana mafy satria tokony hijanona mandritra ny fotoana kelikely amin'ny olon-tiany taloha izy ireo alohan'ny ahafahany mahazo ny toerana manokana.
Raha niara-nipetraka tamin'ny namanao ianao ary nisaraka dia manandrama mifindra amin'ny toerana misimisy araka izay azo atao. Na dia midika ho fialam-boly mandritra ny iray volana aza ny fandriana alohan'ny hahitanao ny tranonao manokana.
Toy izany koa, raha efa niaraka tamina mpiara-miasa ianao nefa mbola tsy niara-nipetraka dia manandrama mitady asa hafa. Misy toe-javatra vitsivitsy mahatsiravina toy ny tsy maintsy miatrika ny olon-tianao taloha isan'andro. Mbola ratsy kokoa aza raha toa ka manana toerana ambony izy ireo, toy ny maha mpanara-maso na mpitantana anao azy ireo.
Ny halavirana dia manafaingana ny fizotran'ny fanasitranana. Tena zavatra 'tsy hita maso, tsy ao an-tsaina' loatra izany - tsy ho azonao atao ny mamoaka azy ireo tsy ho ao an-tsainao fotsiny, fa farafaharatsiny tsy ho atosika amin'ny tavanao tsy tapaka izy ireo.
3. Ny fahatokisanao tena sy ny fahamendrehanao.
Ny fahatsapanao ny tenanao dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fizotranao. Ny ampahany amin'io fanasitranana io dia midika matetika hoe mandroso sy mifanerasera amin'ny olon-kafa. Tsy ilaina intsony ny milaza fa antony manokana maro no mipoitra rehefa mamboly fifandraisana vaovao.
Raha feno sy afa-po amin'ny ezaka ataonao ianao dia ho mora kokoa amin'ny hafa ny mahita anao manintona.
Toy izany koa, raha mitazona ny fahazotoana sy ny fahasalamana ianao ary mahatsiaro ho faly amin'ny fisehoanao sy ny toetranao amin'ny ankapobeny dia mety tsy ho sorena amin'ny fisarahana ianao. Fantatrao fa tsy isalasalana fa ho afaka hanana fifandraisana lehibe hafa ianao amin'ny olon-kafa.
Raha ny marina dia mety hifandray amin'ny olona mety kokoa aminao ianao.
4. Ny tena fahatsapanao momba ny fiarahana.
Ny olona sasany dia mihantona kokoa noho ny fandavana sy ny fahafaham-baraka mety ho tsapany momba ny fisarahana noho ny tena misaona ny fahaverezan'ny fifandraisana.
Anontanio ny tenanao raha tena marina tokoa ny fiaraha-miasa nisy anao. Manana fifandraisana marina sy mahatalanjona amin'ny olona hafa ve ianao? Sa niaraka ianareo roa satria manintona ary miaraka tsara?
Nahazo tombony tamin'ny volan'ny tsirairay ve ianao? Fihetsiketsehana ve izany? Moa ve nahatsapa ho afa-po ianao rehefa niaraka? Sa ve ianao tao amin'ity fifandraisana ity dia zavatra tokony hatao mandra-pahatongan'ny olona tsara kokoa?
Fantaro ny tenanao, toy ny mahazatra, ary raiso ny fifandraisana rehetra toy ny itiavanao sakafo. Diniho ny tsirony, na mankafy azy ianao na tsia, ary ahoana ny fahatsapanao rehefa avy eo.
Fantaro avy eo raha toa tsara lavitra noho ny teo amin'ny taratasy ny fahitana azy noho ilay tena nanandrana azy nandritra ilay zavatra niainana.
Avy eo, azonao atao ny mandinika indray ny safidy sy ny anton-javatra nahatonga anao hiaraka amin'izany fiaraha-miasa izany, amin'izay ianao afaka mamorona indray ny fizotrany, na misoroka tanteraka an'io karazana fisakafoanana io.
Ianao no mihinana, ary izany dia mandeha amin'ny fifanakalozana angovo koa.
5. Nanao ahoana ny fisarahana.
Rehefa tonga amin'ny fiafarana voajanahary ny fifandraisana iray, dia mety mbola handratra kely ihany, fa matetika kosa misy fahatsapana fanamaivanana
Amin'ny tranga toa itony, ny roa tonta dia toa nitazona ny toe-piainana nandritra ny fotoana kelikely. Indraindray mandritra ny taona maro. Mety efa nanomboka nalahelo ny fifandraisana aza izy ireo talohan'ny nifaranany tamin'ny fomba ofisialy.
Noho izany, rehefa mitranga ny fisarahana, ny 'ratra' izay iainan'ny roa tonta dia ny tahotra sy ny tsy mahazo aina amin'ny fanovana noho ny zavatra hafa rehetra.
Raha vantany vao vita izany dia manomboka mahatsapa fahalalahana milamina sy akaiky ny roa tonta. Raha ny marina dia mety hifanaraka tsara kokoa noho ny taloha izy ireo nandritra ny fiarahan'izy ireo!
Raha toa ka toy izany no nisarahan'ny fisarahanareo dia mety hanomboka ho salama haingana ianao. Eny, mety mbola halahelo ihany ianao amin'ny faran'ny fiarahanana, ary mety ho mahazo twinges momba izany ianao mandritra ny fotoana fohy. Fa raha misaraka amin'ny resaka tsara ianao, dia azo inoana fa ho malemy fanahy ireo kambana ireo, ary afaka hifandray tsara ianareo roa.
Ho tantara hafa izany raha fisaraham-panambadiana ratsy tarehy, miaraka amina fihetseham-po mihombo na toe-javatra mampivadi-po mialoha azy.
Ary mety ho mikorontana indrindra raha olona iray ihany no maniry ny hamaranana azy. Izay mitondra antsika amin'ny tranga manaraka…
6. Iza no namarana ny zavatra.
Raha ianao no namarana ny zavatra dia mety hahatsapa ho meloka mandritra ny fotoana kelikely ianao.
Ny habetsahan'ny fahatsapana ho meloka sy ny ratra dia ho tsapanao fa miankina amin'ny lafin-javatra maro, ao anatin'izany ny hoe ny olon-tianao taloha dia manandrana mandresy lahatra anao hijanona miaraka. Mandrahona ny hamono tena ve izy ireo? Sa ny fampiasana ny zanakao ho toy ny pion mba hanandrana mifehy ny fihetsikao?
Raha tsy izany, raha ianao no nisaraka, ahoana ny fahitanao an'ity toe-javatra ity?
Efa nanandrana namerina ny sakaizanao ve ianao? Raha eny, nahoana?
Raha nihazona ny fanantenana fampihavanana ianao, na dia lalina fantatrao aza fa tsy misy vintana, dia ho elaela kokoa ianao vao tafavoaka ny fisarahana noho ny hanaiky fa tapitra izany. Ity karazana fanekena ity dia tena mahamaina, saingy tsara kokoa ho an'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-pihetseham-po.
7. Na manana mekanika miady amin'ny ratra taloha ianao.
Ny olona efa niaina toe-javatra ratsy maro dia mety manana mekanisma hiatrehana izay hanampy azy ireo hihoatra izany haingana.
Mazava ho azy, ny mifanohitra amin'izany dia mety ho marina ihany koa - ny olona efa niaina trauma lehibe dia mety ho hypersensitive.
Raha tokony hanjary hatanjaka kokoa amin'ny toe-javatra ratsy izy ireo, dia mety hiafara amin'ny trauma be lavitra noho ny hafa amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany. Araka izany, rehefa misy fisarahana, dia hanafoana ny faharatrana taloha tsy tambo isaina, hahatonga ny tsingerin'ny fanasitranana ho lava kokoa.
Inona avy ireo fihetsika mety hisakana anao tsy handroso?
Betsaka ny olona no mandoto tena amin'ny fizotran'ny fanasitranana nefa tsy mahatsapa akory fa manao izany izy. Ireto misy fomba sasany anaovan'izy ireo izany:
1. Fikatsoana amin'ny media sosialy.
Alohan'ny hisian'ny tambajotra sosialy sy tranokala toy ny Facebook, Twitter, ary Instagram, ny fomba tokana handrenesantsika ny momba ny taloha dia ny miresaka aminy mivantana, na manontany azy ireo amin'ny alàlan'ny vondrom-piarahamonintsika.
Izahay amin'ny ankapobeny dia manandrana misoroka an'ity farany izahay satria manontany tena ny naman'ny namanao izay ataon'ny olon-tianao taloha, ary ratsy endrika aminao izany.
Ny safidy hafa dia ny fanenjehana azy ireo, mazava ho azy, saingy tafiditra ao amin'ny sokajy 'tsy tiana' voalaza etsy ambony.
Ianao ve dia manamarina ireo mombamomba ny olon-tianao taloha? Raha izany dia ilaina ny manontany tena hoe maninona ianao no manao an'izany.
Azo takarina fa mety malahelo azy ireo ianao, ary te-hizaha raha toa ka maninona izy ireo, fa tena manampy anao handroso ve izany?
Raha izy ireo no nanomboka ny fisarahana, dia azonao atao ny manamarina azy ireo raha toa ka miaraka amin'ny olona vaovao izy ireo. Ny olona sasany dia manao an'io mba hahitana raha misy ny mety hiverenana miaraka indray - raha tsy misy porofo milaza fa tafiditra amina olona hafa izy ireo dia mety mbola misy fanantenana ihany.
Etsy ankilany, raha hitanao fa mahita olon-kafa izy ireo, dia azo inoana fa handrehitra na hampitombo ny karazana fahatsapana isan-karazany izany. Raha nanantena vintana hafa ianao, dia mety handrava ny fonao indray ny fijerena ny sarin'izy ireo miaraka amina mpiara-miasa vaovao.
Azonao atao koa ny manomboka mampitaha ny tenanao amin'ity olona vaovao ity, ary mamolavola eritreritra mainty mainty amin'ny lafiny maro.
Raha tanora kokoa noho ianao izy ireo dia mety manomboka tsy mahatoky tena amin'ny taonanao ianao. Toy izany koa raha toa ka heverinao ho manintona kokoa izy ireo, na mahomby, na lafiny hafa mety hahatonga anao hahatsiaro tena ho ambany.
2. Mijery sary sy horonan-tsary taloha.
Ny teknolojia maoderina dia afaka manakana antsika tsy handroso amin'ny fomba hafa koa. Mora lavitra kokoa ny mampatsiahy ireo fahatsiarovanao nizara tamin'ny olon-tianao taloha satria azo inoana fa nahazo sary na horonan-tsary be dia be ianareo tao amin'ny mombamomba anao na findainao.
Mora sy manintona tokoa ny mijery ireo sy miverina amin'ny fotoana falifaly. Raha atao ny andro, dia tsy hanana sary ara-nofo fotsiny ianareo roa ary afaka mametraka azy ireo mora foana ao anaty boaty na mandoro azy ireo raha tianao izany.
Toy izany koa, azonao atao ny mamafa ny fahatsiarovana nomerika momba anao sy ny olon-tianao taloha amin'ny telefaona sy ny mombamomba anao.
3. Famakiana ireo hafatra taloha.
Mety hanana hafatra an'arivony na an'aliny eo aminao sy ny vadinao taloha ianao. Mamaky amin'ny alalàn'izy ireo ve ianao mitady ny antony nanapahan'ny fifandraisana tamin'ny fomba nahalalany na ny toerana nanombohany tsy nety?
Isaky ny manao an'io ianao dia manosika fotsiny ilay ratra mivelatra izay fanaintainanao misaraka. Manakana azy tsy ho sitrana ara-dalàna izany.
4. Mifikitra amin'ny fahazarana nozarainao tamin'ny olon-tianao taloha.
Ankoatry ny fanatrehan'ny nomerika ny olon-tianao taloha dia misy ihany koa ny dikany ara-pihetseham-po amin'ny zavatra sasany izay mety niara-nanao.
Toetra 20 an'ny narôsy mahery setra
Ohatra, angamba niara-nijery fampisehoana iray ianao na niara-nisakafo antoandro manokana tao amin'io kafe kely tsara io tamin'ny Alahady. Rahoviana ary raha manao ireo zavatra ireo ianao izao, dia mety hanaitra fahatsiarovana sy fihetseham-po taloha izany.
Mety hanampy anao ny famelana ny olon-tianao raha tsy mijerijery vetivety an'io fampisehoana io ianao ary misoroka ny fisotroana kafe amin'ny ho avy koa. Indray andro ireo zavatra ireo dia tsy hisy fiantraikany ara-pientanam-po aminao ary ho afaka hiverina any aminy ianao, fa amin'izao fotoana izao, apetraho amin'ny lafiny iray izy ireo.
Mianara mitazona lavitra ary avelao handeha.
Na ianao no nanomboka ny fisarahana, na izy ireo dia tsara kokoa ny mamela ny alika matory handainga. Arotsaho ary sakano ny kaonty sosialy mba tsy halaim-panahy hijery azy ireo ianao.
Ampahafantaro ny namanao sy ny fianakavianao fa tsy te handre na inona na inona momba ny taloha ianao, ary angataho izy ireo hitahiry info ho azy ireo hahafahanao manasitrana sy mandroso.
Toy izany koa ny fihazonana ireo zavatra mety ho navelan'izy ireo teo amin'ny toeranao.
Na efa nangataka ireo zavatra ireo izy ireo na tsia, dia ario izy ireo. Izy ireo dia fampahatsiahivana fotsiny an'ilay olona niombonanao. Raha manana ny adiresy vaovaony izy ireo, fenoy ny zava-drehetra ary alefaso aminy. Na mahazo namana namana handao azy.
Na dia somary ratsy aza ny fisarahana, zava-dehibe ny manala ireo entana ireo amin'ny habakao amin'ny fahasoavana sy ny finiavana tsara. Omeo fotoana ny namanao taloha hamerina ny entan'izy ireo, indrindra raha misy firaiketam-po amin'izy ireo, na raha nandany fotoana sy vola be izy ireo hahazoana izany.
Miezaha tsy hanaitaitra sy handoro na hanimba ny fananany 'hiverina aminy' noho ny fanaintainanao. Hanomboka tsingerin'ny angovo ratsy tarehy fotsiny izay hahatonga azy ireo hamaly faty, ary avy eo hataonao mifandimby, sns.
Ny tanjona eto dia ny manapaka ny fifandraisana ary miroso amin'ny fomba mahasalama. Mikendry ny fitoniana ara-pientanam-po ianao fa tsy fanahy iniana handratra tena indray.
Ahoana raha tsy mijanona fotsiny ny fanaintainana?
Misy ny tranga rehefa mifarana amin'ny fomba mahatsiravina lehibe ny fifandraisana. Raha niafara tamin'ny trauma ny fiaraha-miasa nataonao, dia mety mbola handratra anao mandritra ny fotoana fohy izany.
Ohatra, zavatra iray izany raha nisaraka ianareo roa satria hitanao fa namitaka anao izy ireo.
Zavatra iray hafa tanteraka izany raha nofenoinao ny fiainanao manontolo ary nandanianao ny volanao rehetra hivezivezy manerana ny firenena hiaraka amin'izy ireo, vao fantatra fa efa nanambady izy ireo ary sombin-javatra ianao.
Rehefa mivadibadika mahatsiravina ny olona iray dia namela ny tenany hitia sy hitoky izy, io karazana ratra io dia miteraka ratra lalina. Raha ny marina dia matetika sarotra ny miverina avy eo raha tsy misy fanampiana.
Ny fanandramana trauma iray tahaka izao dia mety hiteraka fanahiana ratsy sy fahaketrahana, ary koa ireo olana hatokisana maharitra. Raha simbaina mafy ianao tamin'ny faran'ny fifaranan'ny fiarahanareo dia tsy misy mahamenatra ny miresaka amin'ny olona momba izany.
Ny namanao sy ny fianakavianao dia afaka manampy, raha karazana manohana izy ireo izay afaka mahatakatra ny zavatra iainanao. Azonao atao ihany koa ny miresaka amin'ny mpanolotsaina fanampiana ara-panahy, toy ny pretra, pasiteranao, raby, imam… na inona na inona fivavahana na filozofia arahinao, misy vintana misy olona iray ao amin'ny faribolanao afaka manampy anao hahazo fihavanana sy fahazavana amin'ity fikorontanana ity
Mamorona fahazarana ho anao izay mifantoka amin'ny fanasitranana sy miasa amin'ny alàlan'ny zavatra niainanao. Ny fampihetseham-batana dia mety hanampy betsaka amin'izany. Rehefa mahatsapa angovo toa ny hatezerana, fahasosorana na famadihana ianao, dia mandehana mitsangatsangana na mihazakazaka. Na makà tady mitsambikina raha tsy afaka mivoaka ivelany ary mandingana mandra-pahatonga anao ho tony.
Manomboha manao yoga na tai chi, na fanazarana mitovy amin'izany izay mampiditra saina, vatana ary fanahy. Amin'ny alàlan'ny fampifantohana ny herinao rehetra amin'izao fotoana izao, amin'ny vatanao sy ny fofonao, ny fifantohanao rehetra dia alaina amin'ny fiadananao manokana. Tsy hoe nanao ratsy tamin'inona ianao?
Raha, aorian'ny roa volana, dia hitanao fa mbola mijaly mafy ianao noho izany rehetra izany, dia mieritrereta mangataka fanampiana matihanina hafa. Ny mpanolotsaina iray amin'ny fifandraisana dia mety ho afaka mamoaka anao amin'ny fanaintainana izay iainanao mba hahafahanao miroso amin'ny fomba mahasalama. Amporisihinay ny serivisy an-tserasera avy amin'ny Relationship Hero - hifandray amin'ny mpanolotsaina na handamina andro sy fotoana iray hanaovana fivoriana iray.
Rahoviana ianao vao manomboka ho salama?
Mampalahelo fa tsy misy daty famaranana tanteraka izay hivoaka rehefa manomboka tsy dia maharary ianao. Miankina betsaka amin'ny toe-panahinao manokana, ary koa ny fiverenanao haingana amin'ny toe-javatra.
Ny dingana samihafa amin'ny alahelo mitranga rehefa maty ny olona iray malalantsika dia azo ampiharina amin'ny fahaverezan'ny fifandraisana. Ny ankamaroan'ny olona dia manomboka amin'ny fandavana sy ny fangirifiriana, avy eo mivadika hatezerana sy / na famoizam-po… fa ny faharetan'ny fijanonany ao amin'izany fanjakana romotra sy ketraka izany no miankina aminy.
Tsy azo ihodivirana ny fanaintainana, fa ny fijaliana kosa tsy voatery. Safidy io ary safidintsika avokoa ny hetsika ataontsika.
Raha mandratra mafy ianao noho ny fisarahana, manokana fotoana kely hahalalanao tena momba izay tena maharary anao.
Ahoana no hahafantaranao fa manomboka mahazo aina ianao?
Voalohany indrindra, raha ny eritreritrao akaiky momba ny mifoha dia tsy mifototra amin'ny manodidina anao.
Mety hifoha ianao ary ho faly fa miposaka ny masoandro, na hieritreritra ireo zavatra hafahafa nofinofisinao ianao. Tampoka teo, na dia manana kettle ho an'ny dite aza ianao na mandroroa ny voankazo ao anaty voamadinika dia ho tsapanao fa mbola tsy nieritreritra ny momba ny taloha ianao. Ary tena famantarana tsara izany.
Amin'ny ankapobeny, ho fantatrao fa manomboka miala sasatra ianao rehefa afaka mieritreritra momba ny sakaizanao taloha ary tsy manana onjam-pihetseham-po mahery eo noho eo. Tsy misy tselatra fahatezerana, tsy misy onja ketraka. Mety mbola hahatsapa fanaintainana kely ianao izao ary avy eo, fa afaka mieritreritra azy ireo amin'ny fomba tsy miandany kokoa ianao.
Na dia elaela aza no ahatongavanao dia ho tonga any amin'io toerana io ianao miaraka amin'ny fanampiana na tsy misy azy.
Mitolona amin'ny fisarahana ary mila fanampiana vitsivitsy handefasana ny fihetsem-ponao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ahoana ny fampiasana ny lalàna tsy misy fifandraisana aorian'ny fisarahana amina ex
Tokony hosakananao ny taloha? Tombontsoa 5 sy 4 maharatsy ny fanakanana azy ireo
Inona no hatao raha manenina ianao amin'ny fisarahana aminy
Mampiaraka indray aorian'ny fisarahana: Mandra-pahoviana no tokony hiandrasanao?
Fomba 10 hiatrehana rehefa mandroso ny taloha (ary mbola tsy nanao izany!)
Fanontaniana 13 hapetraka amin'ny tenanao alohan'ny hahatongavanao ho mpinamana amin'ny sakaizanao taloha
ny fomba hampiadana ny fifandraisana nefa tsy hampitsahatra azy
Ahoana ny fomba hahatongavanao ho mahatsapa firaisana
amin'ny firy no manomboka ny valin-kafatra
raiki-pitia amin'olona vao hitanao
zava-misy mahaliana momba anao hilazana amin'ny olona
dia mbola mipetraka ao amin'ny exo
zavatra mahafinaritra hatao rehefa mankaleo anao